လက်ကား Bucket Teeth Heavy Duty ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Pingtai
Link Chain Assembly ကို ခြေရာခံပါ။
Sprocket အပိုင်းကို အတုလုပ်ထားသည်။
Carrier Roller တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
Bucket Teeth အကြီးစားတာဝန်
မူရင်းနေရာ - တရုတ်
ပေးပို့ချိန်: 7-30 ရက်
စျေးနှုန်းသက်တမ်း- FOB/ CIF/ CFR
excavator bucket သွားများ စီးဆင်းမှု ဖြစ်စဉ်ကဘာလဲ
excavator ပုံးသွားများ စီးဆင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်- သဲပုံသွင်းခြင်း၊ အတုလုပ်ခြင်း၊ တိကျစွာ ပုံသွင်းခြင်း။
Excavator bucket tooth သည် excavator တွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် လူ့သွားများနှင့် ဆင်တူသည်။၎င်းသည် သွားအခြေခံနှင့် သွားထိပ်ဖျားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပေါင်းပုံးသွားတစ်ချောင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှစ်ခုကို ပင်ရိုးတံဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် bucket tooth wear ချို့ယွင်းသွားသော အစိတ်အပိုင်းသည် သွားထိပ်ဖျားဖြစ်ပြီး၊ ထိပ်ဖျားကို အစားထိုးနိုင်သရွေ့၊
excavator ပုံးသွားများအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။Excavator bucket သွားများကို ကျောက်သွားများ (သံရိုင်း၊ ကျောက်ရိုင်း စသည်)၊ မြေသားသွားများ (မြေ၊ သဲစသည်)၊ conical teeth (ကျောက်မီးသွေးတွင်းများတွင် အသုံးပြုသည်) ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
Excavator bucket သွားများကို အလျားလိုက် pin bucket teeth (Hitachi excavator)၊ အလျားလိုက် pin bucket teeth (Komatsu excavator, Caterpillar excavator, Daewoo excavator, Kobelco excavator, etc.), rotary dig bucket teeth (V series bucket)။
ဖော်ပြချက်- BUCKET သွားများတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကြီးလေးသောတာဝန်
ပို့ဆောင်ချိန်: 7-30 ရက်
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း- L/CT/T
စျေးနှုန်း သက်တမ်း- FOB / CIF / CFR
အနည်းဆုံး မှာယူမှု ပမာဏ- 1 PC
Supply နိုင်ခြင်း: 10000 PCS/လ
နည်းပညာ- တိကျစွာ Casting / Forging
အရည်အသွေး: သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း အကြီးစား
အာမခံအချိန်- ၂၄ လ
အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု
အရောင်- အဝါရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင် သို့မဟုတ် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုအပ်သည်။
excavator ၏ အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ပုံးအံများကို မည်သို့စီရင်မည်နည်း။
Excavator ပုံးသွားများသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်တွင်3ရက် (36 နာရီခန့်) အရည်အချင်းမပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များအဖြစ် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။ပုံးသွားများ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ထွန်ခြစ်ခြစ်ရာများနှင့် ထိပ်ဖျားတွင် ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္ဍာန် အနည်းငယ်ရှိသည်။bucket tooth work face နှင့် excavated object contact ၏ force analysis သည် မတူညီသော stress အဆင့်များတွင် ပြီးပြည့်စုံသော excavation process တွင်၊ အရှိန်သည် မြန်ဆန်သောကြောင့် bucket tooth ၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ပထမဆုံးထိတွေ့ရသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် ပုံးထိပ်၊ သွားများကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေခြင်း။ရေပုံးသွားများ အထွက်နှုန်းနည်းပါက ထိပ်ဖျားတွင် ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ပုံးသွားများသည် မြေသား၊ ပွတ်တိုက်ကာ ကြေမွသွားကာ အလယ်တွင် မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့နှင့် မည်းမှောင်နေကာ ပုံးသွားများကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း ညွှန်ပြသည်။အဓိကအလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ (ထုထည်အပိုင်း) သည် 0.38C၊ 0.91Cr,0.83Mn နှင့် 0.92Si.သတ္တုပစ္စည်းများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် ပစ္စည်းစက်ရုံ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ excavator bucket teeth ၏ ထုတ်လုပ်မှု အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း
MLD-10 wear test machine wear test ဖြင့် Bucket tooth performance analysis ။မက်ထရစ်နှင့် ထည့်သွင်းမှုများ၏ ခံနိုင်ရည်အားသည် သေးငယ်သော ထိခိုက်မှုအခြေအနေအောက်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်ထားသော 45 သံမဏိထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ matrix ၏ wear resistance နှင့် inserts များသည် မတူညီပါ။matrix သည် ထည့်သွင်းမှုများထက် ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။မက်ထရစ်၏ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထည့်သွင်းမှုများသည် ပုံးသွားများအတွင်းရှိ ၎င်းနှင့် နီးစပ်ပါသည်။ခဲပုံးထဲတွင် ထည့်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် သံအေး၏ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်။သွန်းလုပ်စဉ်အတွင်း၊ မက်ထရစ်စပါးကို ၎င်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ခံနိုင်ရည်အား တိုးတက်စေရန် သန့်စင်ခဲ့သည်။Casting အပူ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ ထည့်သွင်းမှုများသည် ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် အခန်းကဏ္ဍမပါဝင်သည့် ဂဟေအပူဒဏ်ခံရသောဇုန်တွင် အလားတူဖွဲ့စည်းပုံများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ထည့်သွင်းမှုများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော အပူကုသမှုကို လုပ်ဆောင်ပါက၊ သံပုံးသွားများ၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
1. သင်သည် ကုန်သည် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို့ကုန်အခွင့်အရေးရှိသော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံ Quanzhou Nanan မြို့ Fujian ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလုပ်ငန်းတွင် နှစ်သုံးဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်၏ဘူဒိုဇာ အစိတ်အပိုင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ဘူဒိုဇာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ဟု မည်သို့သေချာနိုင်မည်နည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အား မော်ဒယ်နံပါတ် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ မူရင်းနံပါတ်ကို အကြံပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံများ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားကို တိုင်းတာပြီး သင်နှင့်အတူ အတည်ပြုပါမည်။
3. မင်းရဲ့ အနိမ့်ဆုံးအမိန့်ကဘာလဲ။
သင်ဝယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါသည်။၎င်းသည်ပုံမှန်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရှိပါက၊ MOQ အတွက်မလိုအပ်ပါ။
4. ဖောက်သည်များအား ထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖန်တီးရန် သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖန်တီးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။ဝယ်ယူသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက် ပုံများ၊ အတိုင်းအတာများ သို့မဟုတ် နမူနာအစစ်အမှန်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပုံမှန်ပစ္စည်းပို့ချိန်သည် တစ်လခန့်သာရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ပစ္စည်းရှိလျှင်
6. ငွေပေးချေမှု စည်းမျဉ်းများ ကရော ဘယ်လိုလဲ။
T/T သို့မဟုတ် L/C။အခြားအသုံးအနှုန်းများကိုလည်း ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
7.ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။
သေချာပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
OEM/ODM သည် ကြိုဆိုပါသည်၊ သဘောတရားမှ ကုန်ချောအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံတွင် (ဒီဇိုင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် ထုတ်လုပ်မှု) အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
1. တစ်နှစ်အာမခံ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဝတ်ဆင်မှုသက်တမ်းရှိသော ပျက်စီးသွားသူများအတွက် အခမဲ့ လဲလှယ်ပေးခြင်း။
2.Product စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း OEM/ODM အမိန့်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား လိုင်း သို့မဟုတ် ဗီဒီယို နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု ပေးဆောင်ပါ။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့် သင့်စျေးကွက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးပါ။
5.ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်အေးဂျင့်ထံသို့ VIP ကုသမှု။
ယခင်- Bucket Pin အကြီးစား
နောက်တစ်ခု: Carrier Roller တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
CAT D9N D9R D9T ခြေရာခံကြိတ်စက် နှစ်ထပ် Flange 1969...
D11 ခြေရာခံ ကြိတ်စက် တပ်ဆင်မှု နှစ်ထပ် အနားကွပ် 9976194...
D39 ထိပ်တန်း Roller လက်ကား သတ္တုတွင်း 124-30-00132
D275 ခြေရာခံကြိတ်စက် ASS'Y နှစ်ထပ်အနားကွပ် 17M-30-00330
Mtg Wear Parts, Excavator Bucket Cutting Edge, Excavator Bucket Wear အစိတ်အပိုင်းများ, Excavator Undercarriage Wear, High Strength Bolt, Bearing Roller ကို ခြေရာခံပါ။,